Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment कांग्रेस नेता नविन्द्रराज जोशीलाई मस्तिष्कघात, उपचार चल्दै - Pnpkhabar.com
काठमाडौं, १४ फागुन : नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री नविन्द्रराज जोशीलाई मस्तिष्कघात भएको छ । उनको अहिले नर्भिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
जोशीलाई गएराति स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि वीर अस्पतालमा भर्ना गरिएकोमा अहिले नर्भिक अस्पतालमा लगिएको जोशीको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । जोशीको मस्तिष्कमा रगत जमेको उपचारमा संलग्न डाक्टरहरुले बताएका छन् ।
पारिवारिक स्रोतका अनुसार जोशीको अवस्था गम्भिर रहेको र शल्यक्रियाको तयारी भईरहेको छ । जोशीको छातीमा समस्या देखिदै आएको थियो । त्यसबेला विर अस्पतालका छाती रोग विशेषज्ञ डा. अशेष ढुंगाना र छाला रोग विशेषज्ञ डा. अनुपमा कार्कीले उपचार गरेका थिए । उनको छालामा दादको पनि समस्या देखिएको थियो ।